नांगा देखि बांगाबाबा सम्मलाई खर्च – ABC KHABAR
नांगा देखि बांगाबाबा सम्मलाई खर्च
March 10, 2016 ABC Khabar समाचार, समाज
काठमाडौं, २७ फागुन । सरकारले महाशिव रात्रीको अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा आएका साधुसन्तलाई खर्च दिएर विदाई गरेको छ । पशुपतिमा आएका नांगाबाबा देखि बांगा बाबा सम्म सबैलाई खर्च दिइएको हो । उनीहरुलाई
पशुपति विकास कोषको खाताबाट रकम निकालेर सालैमारी आएका साधुसन्तहरुलाई सरकारले रसदपानीको व्यवस्था गर्ने गरेको हो । सरकारले यसरी उपलब्ध गराउँदै आएको रकमले सरकार अझै हिन्दुपक्षिय देखिदै आएको अन्यधर्मावलम्बीहरुले आरोप लगाएका छन् । पशुपति क्षेत्रमा आउने जुङगे बाबा देखि नाङगे बाबा सबैलाई पैसा दिनु उनीहरुलाई सहानुभुती दिनु भएको भएपनि सबै धर्मवालम्बि तिर्थालुहरुलाई समान व्यवहार नगरेको उनीहरुको आरोप छ ।
सरकाले हिन्दुधर्मवालम्बी साधु सन्तलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट खर्च उपलब्ध गराएको हो । शिवरात्रिमा मेला भर्न पशुपति आएका करिब पाँचसय साधुसन्तलाई बुधबार उपलब्ध गराएको हो ।
देश तथा विदेशबाट आएका साधु, जोगी बाबाजीलगायत सन्तलाई उनीहरको स्तर हेरी एकसय ५१ देखि पाँच हजारसम्म दक्षिणा प्रदान गरिएको कोषका सदस्यसचिव डा गोविन्द टण्डनले बताएका छन् । कोषका अध्यक्ष एवम् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलको उपस्थितीमा रकम वितरण गरिएको थियो ।
सो अवसरमा विभिन्न मिठाइ, दक्षिणा, रुद्राक्षको मालाजस्ता उपहार समेत साधु सन्तलाई उपलब्ध गराइएको थियो । केही छुटपुट भएका साधुसन्तलाई बिहीबार पनि दक्षिणा दिएर बिदाइ गरिने जनाइएको छ । शिवरात्रिमा मेला भर्न भारतका दिल्ली, हरियाणा, पन्जाब, वृन्दावनलगायत स्थानबाट साधुसन्त आएका थिए ।
स्वामी अभियानन्द र ९३ वर्षीय डा भीमा शङ्कर ‘गदुर बाबा’समेत मेला भर्न आउनु भएको थियो । गत वर्ष करिब सात हजार साधु सन्त आएकामा यस वर्ष दुई हजार साधु सन्त आएको अनुमान गरिएको छ । कोषले साधुसन्त व्यवस्थापनका लागि ११ लाख विनियोजन गरेको थियो ।
किरात स्वायत्त राज्यको लागि मार्चपासहुने
काठमाडौंमै भेटियो बर्डफ्लु, २८ हजार कुखुरा नष्ट
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर अधिवेशन चैत २ मा
दिवसकाे नेतृत्वमा यायाेक्खा
खम्पा काण्ड: नेपालबाट मुस्ताङलाई टुक्र्याएर तिब्बत कब्जा गर्न विदेशीले गराएको बिद्रोह !
– राजेन्द्र थापा खम्पाहरू त्यसताका उत्तरी सीमा क्षेत्र कब्जा गरी चीनमाथि … थप
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा केन्द्र सरकारले दिने कि स्थानीयले ?
–जय शिवाहाङ किरातहरुका धेरै संस्कार संस्कृति कला … बाँकी
चिलकाे नजर शिकारमा, गिद्धकाे नजर सिनाेमा
बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ गिद्धजातिहरू … बाँकी
– बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ … बाँकी
अस्पतालकाे शैयाबाट गित लेखन
ज्योतीले यस्तो पनि नाचिन (भिडियो सहित)
यलम्वर संगित प्रतियाेगीहरुलाई भ्रमण (फोटो फिचर सहित)
गायक नन्दुको नयाँगीत ‘को हौ.. को हौ.. तिमि भनन’
अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
Politics of Buddhism in Nepal
Shrestha’s Account of Buddha: De-centring of Myths
Beautiful lake in Annapurna Circuit Trekking